Vaovao - Fomba fiasa sy fiheverana momba ny fanodinana ireo masinina miodina
Ny indostrian'ny milina mazava tsara dia orinasa mazoto miasa mafy, matanjaka amin'ny renivohitra ary matanjaka amin'ny haitao. Manana ambaratonga avo ny indostria. Na dia tsy mahatratra ambaratonga iray aza ny orinasa ankapobeny dia ho sarotra ny hiteraka tombom-barotra. Ny orinasa lehibe dia afaka mampihena ny vidiny amin'ny alàlan'ny fividianana sy famokarana marobe, fandrindrana orinasa, ary fananganana tsena fivarotana isam-paritra izay mandrakotra ny vokatra avy amin'ny faritra sy indostria samihafa. Noho izany, ny indostrian'ny milina marina dia manana toetra mampiavaka an'i Hengqiang. Amin'ny ho avy, ity indostria ity dia hifantoka indrindra amin'ny fampidirana, fampidirana isam-paritra, fampidirana rojo indostrialy ary fampidirana stratejika.
Anisan'izany, ny fampidirana ny faritra dia ny fampifangaroana ireo orinasan-tsoratadidy mazava ao amin'io faritra io ihany, noho izany dia afaka mifantoka amin'ny fampiharana ny tombony amin'ny politika sy ny fitantanana izy io, ary miteraka vokatra ifanarahana sy fiaraha-miasa tsara. Ny fampidirana rojo indostrialy dia asa tokana natambaran'ny indostrian'ny milina, na ireo orinasan-tseranana any ambany dia afaka miara-miasa amin'ireo mpamatsy singa lehibe hamahana ny tavoahangy teknika miatrika singa sarotra; Ny fampidirana stratejika dia ny fampidirana ireo mpiara-miasa stratejika toy ny fiara sy ny tafika mba hahazoany ny ilany any ambaniny, hampivelatra ireo vokatra kendrena ary hampihena ny fatiantoka tsy ilaina mandritra ny fikarohana sy ny fampandrosoana.
Ny fizotran'ny fanodinana faritra marina dia misy fepetra takiana mafy. Ny tsy fitandremana kely mandritra ny fanodinana dia hahatonga ny hadisoan'ny workpiece hihoatra ny fari-pandeferana, ary ilaina ny manamboatra indray na manambara ny fako amin'ny banga, izay mampiakatra be ny vidin'ny famokarana. Noho izany, androany dia miresaka momba ny fitakiana ny fanodinana faritra marina isika, izay afaka manampy antsika hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana. Ny voalohany dia ny takiana habe. Aza hadino ny manaraka tsara ny takiana amin'ny fandeferana amin'ny endriny sy amin'ny toerany. Na dia ireo singa namboarina sy novokarin'ny orinasa aza dia tsy hitovy tanteraka amin'ny refin'ny sary, ny refy tena izy dia ao anatin'ny fandeferana amin'ny refy teôlôjika, izay vokatra mahafeno fepetra rehetra ary azo ampiasaina ampahany.
Faharoa, amin'ny lafiny fampitaovana, ny fikorontanana sy ny famaranana dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny fitaovana misy fampisehoana samihafa. Satria ny dingana mavesatra dia manapaka ny ankamaroan'ny banga, ny workpiece dia hiteraka tsindry anaty be rehefa lehibe ny sakafo ary lehibe ny halalin'ny fanapahana. Amin'izao fotoana izao dia tsy azo tanterahina ny famaranana. Rehefa tapitra ao anatin'ny vanim-potoana iray ny workpiece dia tokony hiasa amin'ny masinina avo lenta kokoa izy io mba hahatratrarana ilay sangan'asa.
Ny fanodinana ireo faritra marim-pototra dia matetika mitaky fitsaboana ambony sy fitsaboana hafanana. Ny fitsaboana amin'ny tany dia tokony hapetraka aorian'ny fametahana milina. Ary amin'ny fizotran'ny famolavolana marina dia tokony hojerena ny hatevin'ny sosona manify aorian'ny fitsaboana eto an-tany. Ny fitsaboana hafanana dia ny fanatsarana ny fahombiazan'ny metaly, noho izany mila atao alohan'ny milina. Ireto voalaza etsy ambony ireto dia ny fepetra takiana arahana amin'ny fanodinana ireo faritra marina.